Saaxiibkii Ayaa Waalay!!! – CABDILLAAHI RAAGE ~SAYYIDKA~
Saaxiibkii Ayaa Waalay!!!
SAYYIDKA January 12, 2012 March 2, 2016 CURIS, QOSOL, SHEEKOFANEED
Axmed Wali iyo Cali halyay waa labo kuray-magaalo oo aad saaxiibo u ah, mudo sided(8) sano ku dhaw ayay is yaqaanaan. Garoonka xaafada labadooduba waa ka caan, midwalabana waxa uu xaafada ku leeyahay naanays caana oo marka aad sheego ay cidwaliba kuu garanayso, Jilbo(Axmed) iyo Diir(Cali) waxay ku caanbaxeen marka kubada laga yimaado, Catabad fadhiga, Hablo ka biica, Caruur laynta iyo Xaafado Shiidka. Ilayn waa laba nin oo sheekadu iskugu dhacdee, maalin ayuu kaftanku la gaadhay in Jilbo saaxiibkii Diir ku yidhaa waan ku waali karaa!!!!. Diir oo la yaaban kuna qoslaaya ayaa ugu jawaabay hadii aad katrid waan kuu qirayaa!!!!.
Maalmo kadib xili uu Diir sheekadaba iloobay ilayn kalaamu layl “Sheeko Habeen” ayay la ahayd isagee, Ayuu Jilbo uga sheekeeyay in xaafado daanta kale ee magaalada kutaala uu ku soo arkay guri girgid ah(Dhoobo ka dhisan) oo ciyaala xaafadahaasi dhex dhigtaan qalabka garoonkooga sida Biraha goolasha iwm. Diir si xaraaro leh oo ciyaal xaafdnimo ku jirto ayuu saaxiibkii sheekada uga guray waxana uu markiiba yidhi meesha may sexdaan?.
-Maya way iska madhantahay ayuu Jilbo ugu jawaabay isagoo saaxiibkii ka codsanaaya in uu la so qaado qalbkaa xili laga kala maqanayahay meesha dhulkuna madawyahay.
Diir oo kubad jacaylku ka sayd caleeyay “Kabad batay” ayuu saaxiibkii ku waafaqay arinka kulana balamay in ay caawaba meesha tagaan oo soo qatan aroortana ranjiga uun ka badalan.
Meelahaa sagaalkii(9) habeenimo xili xaafadaha laga kala xarooday, habeenkuna Gurcud yahay ayay Jilbo iyo Diir is raaceen. Jilbo ayaa gurigii ka hor galay lakiin gudaha uma sii galin waayo waxa uu ogayahay waxa meesha ka jira, Inta uu galin docda(Qaybta hore ee guriga) joogay ayuu soo baxay oo ku yiri saaxiibkii meesha alaabtii way taalaa, cidna ma joogto ee gal oo soo qaad ana dibadaan kaa egiye.
Diir oo dagdagaaya ayaa galay qolkii isagoo alaab eeg eegaaya oo yar sugaaya inta uu wax kala arkaayo ayuu ku war helay max inta hoose kaga dhagay, Haduuba hoos eegay oo uu kala hadlayna waxa uu gartay in wax hayaa uu yahay oday meesha sexda oo markii hore ee Jilbo soo galay ku toosay goorahanbana diyaar u ahaa waxa soo galaaya inuu qabto.
Oday Dibi-Liqay waa nin xaafadan ka caan ah, Gir-gidaayar ayuu seexdaa, cidkastoo ugu soo gasha xadhig gidaarka ku xidhan ayuu ku xidh-xidhaa aroorta marka la isku soo baxana inta uu banaanka geed ku yaala ku xidho ayuu caruurta yar yare e xaafadaha ullo ugu dhiiba oo ay halkaa ku garaacaan.
Diir in saxiibkii uu shirqoolkan u dhigay ayuu markiiba fahmay waxana uu ga’aan saday in uu odayga sasabto, lakiin dibi-liqay baryan oo dhan ayaa la dhibay oo maanta in laga baxo kuma talo jiro maadaama hambeenadan danbe oo dhan inta lagu cayaaro laga baxsan jiray.
Aroortii hore ayuu Jilbo bilaabay in uu xaafadihii saaxiibkii uu ku shirqoolay soo dhex maro isagoo kolba sakad waydiinaaya in ay arkeen nin waalan oo meelahaa socda. Ilayn waa nin garaanaaya meesha saxiibkii ku xidhan yahay iyo xalada dhabta ah ee uu ku noolyahay, qorsha oday-dibiliqayna warkiisa hayee inta uu sakadii ku soo wareegay ayuu kala qaylyay…
-Alla waa kan Alla waa kan Alla waa isagiii…..…
Dadkii oo yaaban ayaa xagiisa soo eegay iyagoo umalaynaya in uu yahay nin uu isna xalay waxka soo xaday ninka meesha ku xidhxidhani, Diirna naftiibaa ku soo noqotay markuu arkay saaxiibkii, Oday Dibi-Liqayna inta uu caruurtii ku yiri ka joojiya usha ayuu u seejeestay xagaa iyo Jilbo oo uu yiri…
-Waar adna muxuu ku yeelay?
-Adeer waa walaalkay iga yar oo intuu wakhti dhawyd waashay uu bilaabay in uu guryaha dadka iska galo xiliyada danbe, ee adeer ma waxbuu idin gaadhsiiyay?
–Oday Dibi-Liqay oo yaaban fajacuna wajigiisa ka muuqdo ayaa inta marna eego Diir marna Jilbo oo nafta iska saaraaya si uu u muujiyo in uu xalay oo dhan raadinaayay walaalkii, ku odhanayaa Jilbo adeer xalay ayuu ii soo galay ana waxaan moodaayay tuug.
Jilbo oo labtiisa ku qaydinaya qosol wayn, dadkana u muujinaaya in uu walaalkii ka war war sanan-yahay ayaa Odaygii ka cadsaday in walaalkii u sii daayo. Oday Dibi-Liqe oo amakaagsan ayaa inta uu Diir xadhigii kafuray Silsilad guriiisa taalay lugaha iyo gacmaha kaga xidhay ayuu inta uu u dhiibay jilbo u diceeyay oo ku yiri “hoo adeer Allaha kugu asturee”.
-C.lahi Raage “Sayyidka”
Curiye Sheekofaneed Somaaliyeed
CURIS, FAN, Igaqosli, Ilaqosol, QOSOL, SHEEKO
Previous FADHIGA SUBULAHA | Fadhiga Afraad
Next Gaallo Sidaa Kuma Dhamaato.